Olee otú Mee VLC uzo n'ime a Video Ntụgharị?
1 na-egwuri egwu VLC
1.3 Play Videos na VLC na airplay
1.4 Play YouTube Videos na VLC
1.5 Play M2TS na VLC
1.6 Play MTS na VLC
1.7 Play M4V na VLC
1.8 Play MP4 na VLC
1.9 Play RTMP na VLC
1.10 Play ISO na VLC
1.11 Play AVI na VLC
1,12 Play WMV na VLC
1,13 Play Midi na VLC
1,14 Play 3D Movies na VLC
1,15 Play AVCHD na VLC
1,16 Play Sopcast na VLC
1,17 FLAC na-egwu
1,18 MP4 na-egwu
1,19 FLV na-egwu
1.20 MKV na-egwu
1,21 MOV na-egwu
1,22 UNDF na-egwu
1,23 Iji VLC maka PS3
2 tọghata & Stream
2.2 Stream Site VLC ka TV
Ma gụọ 2.3 VLC Video Ntụgharị
2.4 VLC ka MP3
2.5 VLC ka MP4
3 edezi na VLC
3.1 Dezie vidoe Iji VLC
3.2 Bugharia Video Iji VLC
3.3 Cut Video Iji VLC
3.4 Racing videos n'ime VLC
3.5 Gbanwee & mmekọrịta VLC Ndepụta Okwu
4 VLC maka Mobile
4.1 VLC maka iOS
4.2 VLC maka iPad
4.3 VLC maka iPhone
4.4 VLC maka Android
4.5 VLC maka Windows Phone
5 VLC nnyemaaka
5.1 VLC nnyemaaka
6 Atụmatụ & Aghụghọ
6.2 VLC kacha ọhụrụ Version
6.3 VLC maka Windows 7
6.4 VLC maka Windows 8
6,6 VLC Wụk Line
6.7 VLC ka ndabere Player
6.8 Rip CD na VLC
6.9 Ọkụ VLC faịlụ ka DVD
6,10 VLC Web ngwa mgbakwunye
6,11 Ime Control VLC
6,13 VLC Uzo mkpirisi
6,14 ihuenyo Capture na VLC
6,15 mmekọrịta VLC Audio
6,20 Snapshots na VLC
6,21 ịgbanwe XBMC ka VLC
6,22 Bụ VLC Nchekwa
VLC bụ a na-ewu ewu mgbasa ozi ọkpụkpọ na ụfọdụ ọgaranya atụmatụ na-eme ya zuru okè video ọkpụkpọ. Ihe kpatara ya bụ na ọ na-akwado a dịgasị iche iche nke media faịlụ na formats. VLC bụghị na arụ orụ media faịlụ ma na-enye ihe nhọrọ dị ka edezi. Mgbe edezi ị nwere ike ịchọ iji tọghata faịlụ formats. Ebe a ị na-ahụ nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ndu maka converting video faịlụ na Windows na Mac.
Nwere ike ikwu Product
Na-eme ka gị na Music - Transer, Download, Record, Manager, Ọkụ Music Ngwá Ọrụ
Nyefee music n'etiti ọ bụla na ngwaọrụ.
Jiri iTunes na Android.
Download music si YouTube / ndị ọzọ music saịtị.
Downlaod music si wuru na-top listi ọkpụkpọ.
Record ọ bụla song ma ọ bụ playlist ị na-ahụ na weebụ.
Idozi music mkpado, mkpuchite na ihichapụ duplicates.
Jikwaa music enweghị iTunes mgbochi.
N'ụzọ zuru okè ndabere / weghachi iTunes n'ọbá akwụkwọ.
Mepụta gị onye omenala mixtape CD mfe!
Professional music ọkpụkpọ / music nkekọrịta ngwá ọrụ.
Windows ọrụ amasị iji VLC n'elu Windows Media Player na ha na-eji ya Ntụgharị atụmatụ ike kwesịrị ekwesị video faịlụ usoro maka ha ngwaọrụ ndị ọzọ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-amaghị otú e si eme na windows ebe a bụ nzọụkwụ.
1. Open VLC media ọkpụkpọ. Ugbu a, na-aga Media menu na ịnyagharịa iji tọghata / ịzọpụta.
2. Mgbe ịpị ya, ị ga-enwe ọhụrụ window "Open Media". Gaa Njikwa taabụ, e i nwere abụọ ngalaba. Ke Akpa ngalaba, ịgbakwunye faịlụ na ị chọrọ iji tọghata na nke abụọ, i nwere ike na-agụnye a sobtaitel faịlụ ka embed na video faịlụ.
1. Pịa na tọghata / Save button mgbe emecha abụọ edere. Na-esote window, ị ga-enwe iji họrọ ebe nchekwa. Ị pụrụ inye faịlụ a aha-amasị gị. Na njedebe, họrọ chọrọ video profaịlụ. VLC enye ndabere ngwugwu nke profaịlụ, nke na-n'ọtụtụ ebe na dị ka ọdịyo ma ọ bụ video format s. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị chọrọ ị nwere ike idezi ma ike ọhụrụ profaịlụ iji ụdị. E nwere iche iche ndị ọzọ ọnọdụ na i nwere ike igwu egwu na. Na-akwụsị nnọọ pịa mmalite.
2. Ozugbo i pịrị mmalite, ị ga-echere maka akakabarede usoro ịrụcha. The ọkpụkpọ iyi faịlụ na ugboro abụọ ọsọ na-atọghata ya. Ozugbo okokụre, ị pụrụ ịhụ na mmepụta faịlụ maka chọrọ N'ihi.
VLC na-etinyegoro na mkpa codecs ma ọ bụrụ na n'ụzọ ụfọdụ gị software version na-efu ụfọdụ codecs ị nwere ike iwunye codec mkpọ. Gbalịa na-K-lite Codec mkpọ. Dị nnọọ Google chọọ ya ị ga-achọta download njikọ.
Akwado format: 3gp, avi, flv, MOV, MKV, mp4, mpeg1, mpeg2, DivX, H / m 263, MPEG 2 audio, mp3, FLAC, pcm na A-iwu.
I nwekwara ike tọghata faịlụ na gị Mac. Ị nwere ike ịmepụta faịlụ na-akwado iTunes na i nwere ike bulite on iCloud ka mmekọrịta na faịlụ gị ọzọ Apple ngwaọrụ ma ọ bụ nanị iji ya maka edezi okike videos. Lee ndị nzọụkwụ nke converting videos na Mac:
1. Open VLC media ọkpụkpọ na ị Mac. Gaa File menu na gbadaa tọghata / Stream. Chere maka igbe na-emeghe. On ọhụrụ window, họrọ faịlụ na ị chọrọ iji tọghata site na ịpị Open Media. Na n'okpuru ngalaba, ị nwere ike mgbe niile tinye ndepụta okwu faịlụ ka embed na video faịlụ. Rụchaa a nzọụkwụ, na-aga tọghata / Stream.
2. Ugbu a, họrọ profaịlụ gị mkpa iji tọghata. E nwere dị iche na ntọala ma tweak na i nwere ike iji ike a omenala profaịlụ. Dị nnọọ họrọ usoro ị chọrọ iji tọghata. Ozugbo ị bụ n'aka niile ọnọdụ zuru okè, pịa Save dị ka File.
3. Ozugbo usoro amalite niile i nwere ime bụ na-eche maka ya rụchaa. Ị pụrụ ịhụ ọganihu. Ego mmepụta faịlụ mgbe akakabarede na-eme.
Ị nwere ike ad ọzọ codec site na wụnye K-lite codec maka Mac. Otú ọ dị, nke ọ bụla sistemụ ị na-eji, VLC abịa na fọrọ nke nta niile formats-enyere gị aka ịhụ videos na-ege ntị music.
Akwado format: 3gp, avi, flv, MOV, MKV, mp4, MPEG 1, mpeg2, DivX, H / m 263, MPEG 2 audio, mp3, FLAC, pcm na A-iwu.
Wondershare Video Convertor Ultimate
VLC abụghị kacha convertor ngwọta ma ọ ezigbo ọrụ. Otú ọ dị, ị na-achọ ihe ka nnọọ ike na-enye gị ihe akara ahụ na-eji Wondershare Video Convertor Ultimate. Ị nwere ike na-ele, agbanwe, welie na tọghata gị videos gụnyere elu-definition ma ọ bụ 3D. Ị nwere ike iji Wondershare ka conversions ngwa ngwa na-adị mfe. Ị na-adịghị na-eche ogologo na ị pụrụ ijide n'aka na ị na-aga na-videos converted n'enweghị onye njehie. Ebe a na-ya zuru ezu atụmatụ.
- Ọ na-atọghata videos, nke ugboro 30 ngwa ngwa nke ukwuu karịa VLC akakabarede ọsọ.
- Ọ na-akwado 159 format ma nọgide na-emelite mgbe nile na-enye a ngwá ọrụ nwere ike fọrọ nke nta tọghata ọ bụla faịlụ. Ọbụna na-arọ formats dị ka 4K video format, ndise àgwà na-anọgide ukwuu.
- Ị enuba gị mgbasa ozi faịlụ site na gị na kọmputa na-smart TV na ala site na nkịtị streamers dị ka Apple TV, chormecast. Jiri video Ntụgharị kacha media nkesa plugin na-ha jikọọ site otu netwọk.
- Ị nwere DLNA nkwado, nke pụtara na ị nwere ike iji Xbox, na ndị ọzọ na DLNA gbaara ngwaọrụ na-agba ọsọ ngwa wdg
- Ị nwere ugbu a HEVC (High arụmọrụ Video Codec) mkpakọ ọkọlọtọ nke awade ugboro abụọ mkpakọ tụnyere ya ụzọ H.264 ma ịnọgide na-enwe mbụ mma.
Mere ga-adịghị VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ egwu .mov faịlụ?
Esi Ejikwa The Speed ​​na VLC Media Player
Otú ịgbanwe VLC Skin
Olee otú Play MDI Audio Files na VLC?
Olee otú Ime akara VLC
Olee otú Play ISO faịlụ na a VLC Media Player?
Otú ịgbanwe Ndi an-kpọ XMBC ka VLC Player?
Olee otú Play na Download YouTube Videos na VLC
VLC DVD: Olee Ọkụ VLC faịlụ ka DVD (Windows 10 gụnyere)
> Resource> VLC> Olee otú Mee VLC uzo n'ime a Video Ntụgharị?